NMSP | Bayda Institute (Myanmar)
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဖဆပလ အစိုးရလက်ထက် “လက်နက်နှင့်ဒီမိုကရေစီ လဲလှယ်ရေး”လမ်းစဉ်အောက်တွင် နိုင်အောင်သိန်းနှင့်နိုင်ငွေသိန်း ဦးဆောင်သည့်”မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး” လက်နက်ချပြီးနောက် လက်နက်မချဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သော မွန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကို မွန်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် နိုင်ရွှေကျင်က ဦးဆောငို စုစည်းပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ဗကဗ) ၊ KNU ပါတ်ီတို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု(မဒညတ) ဖွဲ့စည်းရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် နိုင်ရွှေကျင် ဦးဆောင်သော မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့သို့ နိုင်ဆိတ်နို့ဦးဆောင်သော ညီညွတ်သောမွန်အစည်းအရုံးအဖွဲ့မှ လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ရွှေကျင်နှင့် သဘောထားကွဲပြီး နိုင်ဆိတ်နို့အဖွဲ့ ခွဲထွက်သွားခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပေါင်းစီးခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီက ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သောကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအပါအဝင် KNU ပါတီ၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP)၊ သုံးပါတီဗဟိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗမာပြည်ကွန်မြူပါတီ(ဗကဗ) နှင့် ချင်းဦးစီးအဖွဲ့တို့ပါဝင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု(မဒညတ)အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၇၆ခုနှစ် မာနယ်ပလောဆွေးနွေးပွဲမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(မဒတ)အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂ခုနှစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး သဘောတူညီချက်(မာနယ်ပလောစာချုပ်) ပေါ်ထွက်လာရေးတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင် နိုင်ရွှေကျင်က အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောင်ရေးအဖွဲ့(နဝတ)နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရက ဦးဆောင်ကျင်းပသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်သောကြောင့် ရွေးကောင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို သဘောမတူသောကြောင့် နဝတ အစိုးရနှင့်ရရှိခဲ့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်လည်း ပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို (၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA)ကို လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးနှင့်အတူ သမိုင်းဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာ
တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၈၅၀ ဦ +
၁။ ပေါင် ၂။ ချောင်းဆုံ ၃။ မော်လမြိုင် ၄။ ကျိုက်မရော ၅။ မုဒုံ ၆။ သံဖြူဇရပ်၊ ၇။ရေး၊ ၈။ရေးချောင်း၊ ၉။ ဘုရားသုံးဆူ၊ ၁၀။ သထုံ၊ ၁၁။ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ ၁၂။ မြိတ်၊
5-point State-level Peace Agreement ,Feb 1, 2012
4-point Union-level Peace Agreement, Feb 25, 2012
NMSP’s liaison offices opened in 1995 after the NMSP signedaceasefire agreement with the SLORC. They were closed in April, 2010 after the NMSP rejected transforming intoaBGF. All liaison offices reopened one day after the new ceasefire agreement on Feb. 26, 2012. (ceasefire stipulated that offices could only be opened in locations agreed by both sides)